Anyị maara na ndị ahịa na-ekwu maka Anyị ... | Martech Zone
Anyị maara na ndị ahịa na-ekwu okwu banyere anyị…
Sọnde, Septemba 6, 2009 Fraịde, Jenụwarị 6, 2017 Douglas Karr
Nyaahụ, enwere m obi ụtọ ịjụ Clint Page, CEO nke Dotster, na-elekọta mmadụ media nloghachi na ego. Adị m onye na-akwado Dotster maka afọ 7 ugbu a ma gosipụta ekele m maka ụlọ ọrụ ahụ mgbe m nụrụ banyere nro ahụ. Usoro ọrụ nke ndị na-edebanye aha ndị ọzọ nọ na-agba ndị ahịa ha ume.
2009 bụ afọ nke mgbasa ozi mmekọrịta maka Dotster. Dotster agbasawo ma goro otu ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi anya na nsonaazụ ahụ adịworị iche. Dotster enwewo ike ịmepụta usoro iji tụọ ihe laghachi azụmaahịa maka mbọ ya. Companylọ ọrụ na-ahụ uto n'inweta ndi ahia ohuru, na-enweta njigide nke ndị ahịa, Na ọbụna na-eme ka ọnụ ahịa ndị ahịa na-efu.
“Anyị maara na ndị ahịa na-ekwu maka anyị… na anyị chọrọ iso na mkparịta ụka ndị ahụ“, Clint kwuru.
Twitter bụ Ebe Ọ Dị!
Dotster na-ahụ ọtụtụ mkparịta ụka na ohere Twitter. Mkparịta ụka ndị a na-adịkarị n'etiti nsogbu ndị ahịa - ya mere Dotster enwewo ike ịza ajụjụ yana ịnabata ntinye ndị ahịa iji melite ngwaahịa na ọrụ ha.
Enweela ụfọdụ ihe mgbu na-arịwanye elu, mana Clint kwuru na ahụmịhe kachasị na mgbasa ozi mmekọrịta na-ele ndị ahịa anya ka ha bụrụ ndị na-akwado ndị ahịa. Dotster achọpụtala na ndị ahịa ha chọrọ inyere ha aka n'ihi na ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ ahụ ka mma, mana n'ikpeazụ ọ na-enyekwara onye ahịa aka. Mgbe ụfọdụ, ndị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ ihe ijuanya ndị ahịa - ndị ahịa ahụ echeghị na mmadụ ga-abịarute mmadụ site na nnukwu ụlọ ọrụ dị otú a.
Iso ndi ahia na aru oru. Companylọ ọrụ a na - eto eto nwekwuru uru nke ukwuu nke mere na ha kwenyere na ọ ga - agafe ọrụ ndebanye aha ha. Ọrụ ndị ọzọ agbadaala nkụja ndị ahịa site n'ịgbakwunye ọrụ ndị ahịa na-emebu iji nweta ebe ọzọ mana ha nwere ike ịnweta site na ngwaahịa na ọrụ Dotster.
Clint na-ekwu na ụlọ ọrụ ahụ enweela ike 'ijikọta ọgụgụ isi nke ndị ọrụ Dotster.'
Ijikwa Dotster User Community
Dotster agbasawanyewo ojiji nke mgbasa ozi mgbasa ozi, na nso nso a na nnukwu mkpọsa vidiyo a na-akpọ Next Big Small Business. Asọmpi ahụ chọrọ ka ndị ahịa bulite vidiyo nkeji 2 na-ekwu maka azụmaahịa ha na ojiji Dotster. E wezụga nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi, onye meriri nnukwu mmeri nwetara $ 1,000 na nke abụọ bụ $ 500. Ihe nrite nke atọ bụ aha dị nsọpụrụ sochiri $ 50 na azụmaahịa 20 ọzọ. Ọ bụrụ na ị gbakwunye na ihe niile, chee echiche banyere akụkọ ọma niile Dotster chịkọtara maka $ 2,500! Ọ dịghị njọ!
Nke a bụ onye mmeri, Bike taya Direct:
Dotster kwetara na ha abụghị ọkachamara na mgbasa ozi mmekọrịta - emehiela ụzọ n'ụzọ ụfọdụ. Ma, nke ka mkpa bụ na ha dị kwere ekwe na soshal midia! Ndị ahịa na-arịọ Dotster ka o dozie ihe, ma ọ bụrụ na ha zaghachi ngwa ngwa ma gee ntị na nzaghachi, ha ga-aga nke ọma. Ọ bụrụ na ha emeghị, ha mepụtara ihe Clint kpọrọ ihe agụụ agụụ - onye ozo ga - ejuputa oghere!
Daily Social Media Dashboard
Clint na-enweta ihe ntanetị mgbasa ozi nke ọ na-enyocha kwa ụbọchị. Akụkọ ahụ na-achịkọta okwu na-adịghị mma, okwu dị mma, na akụkọ ụlọ ọrụ. Echere m na ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na onye isi ọrụ ga-ahụ na nlekota ahụike nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ ya bụ akụkụ dị mkpa nke ụbọchị ọ bụla. Nke a nwere ike ịbụ dashboard nke ụlọ ọrụ gị kwesịrị itinye n'ọrụ!
Dotster malitere site na ngalaba na-edeba aha - na-enye ụlọ ọrụ nnabata, nhazi saịtị, mmepe yana sistemụ njikwa ọdịnaya. Dotster amalitela Dotster Jikọọ iji nyere ụlọ ọrụ aka ịmepụta netwọkụ mmekọrịta nke ha. Ha edeela ọmarịcha akwụkwọ akụkọ na ịgbakọ mgbasa ozi mgbasa ozi na ntinye ego.
Ebee ka nlọghachi na ntinye ego maka Social Media?
Dotster na-arụtụ aka n'ọtụtụ ohere iji nwetaghachi nkwụghachi azụ na mgbasa ozi mmekọrịta. Banyere akara na nkwalite:
Mbelata mmefu ahịa
Belata Ahịa Ahịa Akwụ ụgwọ
Meziwanye Branddị Aha
Ha na-ahụkwa nloghachi na Ọrụ Ndị Ahịa:
Belata Ulo olu oku
Meziwanye Oge Nzaghachi Ndị Ahịa
Belata Ego Nchoputa
Dotster na-agbakwa ụlọ ọrụ ume ka ha nwee ike ịnweta teknụzụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ n'ime, enwere nloghachi mgbe ana-elekọta ndị na-elekọta mmadụ… ihe atụ ụfọdụ:
Belata Deslọ Ọrụ Na-ahụ Maka Enyemaka
Ọzụzụ Obere na mmefu njem
Nke kachasị, Dotster nwere ike ịlele nloghachi na itinye ego n'ihe gbasara Ikwesị ntụkwasị obi nke Ahịa:
Mee ka njigide ndị ahịa dị mma
Belata Research / Marketing Costs
Lower mbanye akwụ ụgwọ
Maka ozi ndị ọzọ gbasara obodo ndị ọrụ na Dotster Connect, gaa na weebụsaịtị Dotster Connect ma ọ bụ kpọọ 360-449-5900. M ga-ekwukwa ndụmọdụ Dotster 15 maka Community Ọma!
Foto site na Akwụkwọ akụkọ Portland Business Journal na Dotster.
Tags: anyịnya igwe kwụ ọtọcint peeji nkezoontụpọelekọta mmadụ mediasoshal midiatestimonialyoutube zoo
Dummies: Ntughari maka ezumike nke anyị!
Ndi WordPress Blog Printer-Enyi na Enyi?